မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ကုသိုလ်အလှူပြုခဲ့တဲ့ ဆုပန်ထွာတို့ မိသားစု
ကိုဥက္ကာကျော်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ဆုပန်ထွာတို့ဟာ မင်္ဂလာသက်တမ်း ၄ နှစ်ပြည့်မှာ မိသားစုအတူတူ အလှူအတန်းတွေ လုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆုပန်ထွာက ပြောပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဥက္ကာကျော်ကလည်း ဇနီးချောလေးကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပြီးချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြလာပါတယ်။
Photo: Steplier Klice
သရုပ်ဆောင် ဆုပန်ထွာနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဥက္ကာကျော် တို့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ မှာ မင်္ဂလာသက်တမ်း ၄ နှစ်ပြည့်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တရနေ့လေးမှာ မိသားစုအတူတူ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆုပန်ထွာက ပြောပြလာပါတယ်။
‘’14.2.2019(Happy 4th Anniversary Valentine’s Day)။ ကြာသပတေးနေ့ မိသားစု ဆွမ်းလောင်းကုသိုလ်လေးပါ။ (ဆွမ်း+ငါးခြစ်ဆီပြန်ဟင်း+ပန်းပွင့်ကြော်+ငါးပိရည်ကြို) သွားတိုက်တံ၊သွားတိုက်ဆေး၊ဆပ်ပြာ၊အဝတ်လျော်ဆပ်ပြာ။ သူတော်ကောင်းများနဲ့သာ တွေ့ရ ဆုံရပါလို၏။ဤကုသိုလ်ကောင်းမှူလေးတွေကြောင့်ဘဝမှာစိတ်အေးချမ်းသာယာစွာနေရပါလို၏ဘုရား” ဆိုပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဥက္ကာကျော်ကလည်း မင်္ဂလာသက်တမ်း ၄ နှစ်တိုင်အောင် ဇနီးချောလေးအပေါ် ချစ်တဲ့ အချစ်တွေ မလျော့သေးပါဘူးတဲ့။ အသက်ရှုနေသလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ချစ်တာပါလို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီ ၁၂ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
‘’မာမားရေ...အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာထက် ဘယ်လိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်။ ဒီနေ့မှမဟုတ်ဘူး အမြဲတိုင်းဖြစ်တည်နေတဲ့အဖြစ်၊ နေ့တိုင်း အချိန်တိုင်း မသိစိတ်၊ သိစိတ်၊ ပျော်နေတဲ့အချိန်၊ စိတ်တိုနေတဲ့အချိန်၊ အနားမှာရှိတဲ့အချိန်၊ အနားမရှိတဲ့အချိန်၊ အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်၊ အိပ်ယာထတဲ့အချိန်၊ အချိန်တိုင်းကို တန်ဖိုးထားပြီး အမြဲတမ်း သေလောက်အောင် အစွမ်းကုန် ချစ်ခဲ့တယ်၊ ချစ်နေတယ်၊ ဆက်ချစ်သွားမယ်။ ဘယ်လိုချစ်သလဲဆိုတော့ "အသက်ရှုနေသလိုပါပဲ" အဲ့ဒီလိုချစ်တယ်မိန်းမရေ Happy 4th years Anniversary ပါကလေးငယ်။ I loved you! I love you! I will always love you! ‘’ လို့ ရေးသားခဲ့တာပါ။
ဆုပန်ထွာ(Su Pan Htwar) ကိုတော့ တီဗီကြော်ငြာ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား နဲ့ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံး ပိုင်ရှင်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်တွေ စတင်အားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာသာမက ဂီတဘက်မှာလည်း ‘’သေလောက်အောင် ချစ်တယ်’’ ဆိိုတဲ့ တစ်ကိုယ်တော်အခွေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ ပါဝင်သီဆိုနေရသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။